काठमाडौं । आफुलाई प्रजातान्त्रिक कित्तामा उभ्याउनेहरु पुस १ लाई कालो दिन भन्छन्, कालो दिवसको रुपमा मनाउँछन् । यो पल्ट पनि सत्ताको विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस निकट भ्रातृ संस्थाले पुस १ लाई कालो दिवस भनेका छन् ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतामाथि धरपकड गर्दै पञ्चायती शासन सुरु गरे ।
त्यो बेला नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भएकै बेला बीपी लगायतका नेतालाई पक्राउ गरी तीन महिना सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरीजलमा बन्दी बनाइयो । पुस १ गते तरुण दललगायत संस्थाले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएको दिन भन्दै कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
१७ सालको ‘कु’ र बीपी
पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन शाही सेनाको बलमा अपदस्थ गरिएको आरोप अहिलेसम्म कायमै छ । २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दा सेना प्रयोग गरिएका कुरा प्रकाशमा आएका छन् । कुरा धेरै आए, तर खास कुरो चाँहि बाहिर आएन ।
बीपीले देहान्तअघि आफुले गरेका कार्यको प्राश्चित गर्न खोजेको तर गर्न नसकेको कुराहरु कांग्रेसीजनले अहिले पनि लुकाईरहेकै छन् । यतिसम्म कि टिमुरबोटे घटनाबारे समेत कांग्रेसीजन खुलेर बोल्दैनन् । हुन त आजका दिन यस्ता कुरा गरिनु सान्दर्भिक नमानिएला तर, त्यो बेलाको खास कुरा बाहिर ल्याइए महेन्द्रप्रतिको द्वेष र बीपीप्रतिको सहानुभूति ठीक ठाउँमा आउने थियो ।
अहिलेसम्म बाहिर आएका कुरा यी यस्तै हुन्–सुन्दरीजलमा सेनाको आर्सनलका हाकिमको आवासमा पर्खालले घेरी बीपीलगायतका नेतालाई बन्दी बनाइयो । महेन्द्रको यो कदम पछि सुन्दरीजल बन्दी गृहका नामले चिनिन थाल्यो । सुन्दरीजल बन्दी गृहमै बसेर बीपीले ‘दोषी चश्मा’ कथा सङ्ग्रह बाहेकका साहित्यिक कृतिको रचना गरे । ‘दोषी चश्मा’ कथा संग्रह २००८ साल मै प्रकाशन भइसकेको थियो ।
‘दोषी चश्मा’ कथा सङ्ग्रह प्रकाशनपछि राजनीतिमा व्यस्त भएका बीपीलाई सुन्दरीजल बन्दी गृह साहित्य रचना गर्न वरदान सावित भयो । जहाँबाट यौन मनोविश्लेषणवादी धाराका दर्जनौँ कृति नेपाली साहित्यले पायो । बन्दी गृहमा रचना भएका कृतिमा ‘श्वेतभैरवी’ कथासंग्रह, ‘मोदीआइन’, ‘बाबु, आमा र छोरा’, ‘सुम्निमा’, ‘तीन घुम्ती’, ‘हिटलर र यहुदी’ लगायत उपन्यास थिए ।
यसैगरी, जेलमा बस्दा २०१७ देखि २०२५ सम्मका दैनिकीको सङ्ग्रह ‘जेलजर्नल’, २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सुन्दरीजल बन्दी गृहमा थुनिएपछि लेखिएको दैनिकीको संग्रह ‘फेरि सुन्दरीजल’, ‘आफ्नो कथा’ लगायत कृति पुस १ गतेको शाही कूपछि नै रचना भए ।
पुस १ गतेको घटनापछि बीपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरु गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, दिवानसिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचनलगायतलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनियो ।
अगाडि नै पाकिसकेको थियो खिचडी
दिवंगत डा. तुलसी गिरीले २०१७ भदौ ३० गते नै परराष्ट्रमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिनुको कारण दिए, ‘सरकारले जति काम गर्न सक्थ्यो त्यति गरेन’ भनेर ।
त्यहीबाट अनिष्टका अनेक संकेत आइसकेको कुरा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भेटमा सुनाएका थिए । पछि उनले ‘हिमाल खबर’मा ब्लग नै लेखेछन्, २०७५ साउन १९ मा । शीर्षक थियो, ‘हिजो राति डा. गिरीले राजा भेट्यो’ । भेटमा रिसालले सूर्यबहादुरले कालो टीका लगाएको लगायतका घटनाक्रम सुनाएका थिए ।
उनका अनुसार त्यही बेला राजा महेन्द्रले संसदीयपद्धति विरुद्ध केही गर्दैछन् भन्ने गाइँगुइँ कूटनीतिक क्षेत्रमा चलिसकेको थियो । डा. गिरीले सरकारको काम–कारबाहीप्रति असन्तुष्टि देखाई राजीनामा दिनु र गोप्य रूपमा राजालाई भेट्नु आँधीबेरी आउनुअघि आकाशमा देखिएका अनिष्ट जस्तै थिए । नभन्दै राजदरबारमा कोइराला सरकार ढाल्ने खिचडी पाक्दै गरेको कुरा खुल्छ ।
त्यो बेला सरकारविरुद्ध दरबारले गर्ने षड्यन्त्र सरकारलाई नै थाहा नहुने रहेछ, वरिष्ठ पत्रकार रिसालले सुनाए, ‘‘डा. गिरीले राजालाई भेटेको त्यो सूचनाले सरकारको आँखा खुल्छ । उपाध्यायले भनेका थिए, ‘त्यो पाँच शब्दको सूचनाले धेरै कुराको संकेत दियो’ ।’’
त्यो सूचना दिने गुप्तचर थिए, बेढंगका । लवाई त्यस्तै बेढंगकोे– धोतीमाथि कमिज र कोट, कोटमाथि उपर्ना, टाउकोमा टोपी, बगलीभरि पशुपतिनाथको चन्दन र फूल–प्रसाद । यो सबै रिसालले सुनाएका । सूचना चुहाउन माहिर ती गुप्तचर सधैंजसो बिहान पशुपतिबाट टीका र फूल–प्रसाद लिई राजदरबारको पश्चिम ढोकामा गएर सेनाका अफिसरदेखि जवानसम्मलाई प्रसाद दिने, टीका लाइदिने गर्थे । सानादेखि ठूलासम्मलाई आशीर्वाद दिन्थे, ठूलो स्वरमा भट्याई भट्याई । बेलाा–बेलामा उनले सिपाहीहरूसँग विना सिलसिला, विना प्रसङ्ग र बेतुकका कुरा पनि गर्थे ।
रिसाल अगाडि भन्छन्, ‘यदाकदा हल्का खालका अपशब्द पनि प्रयोग गर्ने बानी थियो उनको । सेनाका जवानलाई मनोरञ्जन दिई दरबारका कुरा थाहा पाउनु उनको ड्यूटी । त्यो दिन उनलाई सेनाका जवानले भनेछन्, ‘बाजे, थाहा पायौ ? हिजो राति डा. तुलसी गिरीले सरकारको दर्शन गरे नि !’
तिनै गुप्तचरले गृहमन्त्रीलाई यो सूचना दिए । त्यो बेला गृह र कानूनमन्त्री थिए, सूर्यप्रसाद उपाध्याय । र, प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला । अनि उपाध्यायले नै भनेका हुन्, ‘हिजो राति डा. गिरीले राजा भेट्यो’ त्यसो भन्ने मान्छे सरकारी गुप्तचर थियो ।’ ती गुप्तचरसँग त्यो बेला प्रायजसो भेट हुने गरेको भए पनि पत्रकार रिसालले उनको नाम भने भनेनन् । उनले उल्दै उपदेश दिए, ‘आफ्नो स्रोतलाई पत्रकारले कहिल्यै पनि मार्नु हुँदैन । बरु आफु फाँसिमा चढ्न तयार हुनु पर्छ, तर स्रोतको घाँटी रेट्ने दुस्साहस कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।
रिसाल अगाडि भन्छन्, ‘खास गरी सरकारका लागि त्यो सानो सूचना ठूलो सूचनाको ढोका खोल्ने साँचो थियो । गुप्तचरी विधिमा त्यस्तै छोटा वाक्यले अरू धेरै सूचना खोज्न ढोका खोलिदिन्छ ।’
अनि राजासँग भेट गर्दा को–को थिए, या एक्लै थिए, कतिबेर कुरा गरे, फर्कंदा अनुहार (प्रसन्न वा खिन्न) कस्तो थियो–यस्ता सूचनाले गुप्तचरीमा धेरै संकेत गर्छ । गुप्तचरीमा विस्तृत कुरा पत्ता लगाउन एकभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै उपाध्यायले गुप्तचर प्रणालीको विस्तृत सूचना नै दिएको पत्रकार रिसाल सुनाउछन् । उनी यस्ता छक्क पार्ने थुप्रै कुराहरु भेटमा सुनाउँछन्, तर आफ्नो स्रोत मुठीमै राख्छन् । केही समय पहिले ‘मैले लिम्पियाधुराको जनगणना गरेको हुँ’ भन्दै उनले दस्तावेज नै सार्वजनिक गरेर सबैलाई छक्क पारेका थिए ।
महेन्द्रले गिरी र थापाको मनपेट बुझेर यसरी जाल हानेछन्
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा विश्वेश्वरप्रसाद, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, श्रीभद्र शर्मा, महेन्द्रनारायण निधि, परशुनारायण चौधरी लगायतका नेता आ–आफ्नोपनका लागि महत्वपूर्ण दरिन्थे । यीमध्ये अरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसक्ने देखेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले डा. गिरी र थापाको मनपेट बझे र जाल हाने ।
गिरीले पछिसम्म साथ दिने कुरामा ढुक्क हुन नसकेपछि गिरीको अग्निपरीक्षा गर्न मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न समेत लगाए, महेन्द्रले । रिसालले हाँस्दै भने, ‘शायद पछि प्रधानमन्त्री बनाउने सुर्केनीमा पारे होलान् । नभन्दै पछि गिरी प्रधानमन्त्री पनि भए ।’ त्यही प्रधानमन्त्री हुने लोभमा डा. गिरीले कोइराला सरकारको परराष्ट्रमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको अनुमान त्यो बेलै गरिएको थियो ।
त्यो बेला विश्वबन्धु थापा प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ‘चीफ ह्विप’ नै थिए । जस्तो अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले प्रमुख सचेतक राखेका हुन्छन् । घटनाक्रम सुनाउँदै पत्रकार रिसालले भने, ‘थापा अमेरिकामा हुने राष्ट्रसंघको १५औं अधिवेशनमा भाग लिंदै थिए, २०१७ असोज १५ देखि । यता, राजाको पुस १ को ‘कु’ पछि डा. गिरी थुनिए, जो ५ पुसमा छुटे । त्यो काण्डको पक्राउपछि छुट्नेमा उनी पहिलो हुन् । ७ पुसमा अमेरिकाबाट फर्कंदै गरेका विश्वबन्धु त्रिभुवन विमानस्थलमै पक्राउ परेर केही घण्टामै छुटे ।’
विश्वबन्धु बाहिर रहेका बेला दरबारले सम्पर्क गरेको अनुमान गरिन्छ । यद्यपि, विश्वबन्धुले यो बारे मुख खोलेका छैनन् । राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १२ गते १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । जसमा डा. गिरी परराष्ट्र, रक्षा, नहर, निर्माण तथा संचार, विद्युत् तथा राजदरबार र विश्वबन्धु गृह, विकास र स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्री भएकै हुन् । पछि डा. गिरी मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष, अध्यक्ष र विश्वबन्धु पनि उपाध्यक्षमा बढुवा भए । मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएका गिरीको देहान्त भइसकेको छ । –प्रस्तुति श्यामसुन्दर
रुपन्देहीमा हतियारसहित तीन भारतीय नागरिक पक्राउ १० मिनेट पहिले
बैंकमा पैसा राख्नेमा कुन जिल्लाका नागरिक अघि ? २२ मिनेट पहिले
भारतीय दूतावासभित्र सुरक्षाकर्मीले आफैँलाई गोली हानी गरे आत्महत्या २८ मिनेट पहिले